रविको राजनीतिक इन्ट्री : पुराना पार्टीलाई होला त चुनौती ? | Ratopati
रविको राजनीतिक इन्ट्री : पुराना पार्टीलाई होला त चुनौती ?
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसार १०, २०७९ chat_bubble_outline0
चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’को प्रभाव र भविष्यमाथि मन्थन भइरहेको छ । लामिछानेले असार ७ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिको असफल विगत र रविको लोकप्रियता राजनीतिक बहसको कसीमा छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा घोषणा भएको रविको पार्टीप्रति युवा आकर्षण पनि देखिएको छ । यसलाई जनमतमा बदल्नु उनका लागि चुनौती छ । पार्टी घोषणापछि प्रकट भएको सद्भावलाई विचार र एजेण्डामार्फत आफ्नो जनमत बनाउन सक्नुपर्ने चुनौतीको पहाड रविसामु छ । किनभने नयाँ चिज आउँदा मान्छेमा आकर्षण र उत्साह देखिनु स्वाभाविक हो । घोषणासभामा देखिएको भीडले मात्र पार्टी र राजनीति बन्छ भन्ने छैन । त्यसको उदाहरण बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रलाई हेर्दा पुग्छ ।
घोषणासभा हेर्न आएकाहरुलाई पार्टीकरण वा संगठित गर्नु रविका लागि चुनौती छ । त्यसका लागि विचार, एजेण्डा, पार्टी संस्कृति र शैली अनिवार्य बन्छ । भोलि पार्टीको नेतृत्वमा को को मान्छे भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । राजनीति भनेको ‘टीम वर्क’ पनि हो । एक जना रवि लामिछाने आउँदैमा चमत्कार हुन्छ भन्ने छैन ।
पुराना दललाई कति चुनौती ?
रविको पार्टीले काँग्रेस र कम्युनिस्टलाई चुनौती दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न छ । पुराना पार्टीलाई नयाँ दल मैदानमा आउने कुरा चुनौती नै हो । पुरानो दलको नेतृत्व ठिक ढङ्गले अपडेट हुन सकेन भने चुनौती हुन्छ । पुराना पार्टी बदलिनुपर्छ भन्ने सन्देश काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्रको उदयले पनि देखाउँछ ।
पुराना पार्टीले नयाँ पुस्ताको सपनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा स्वाभाविक रुपमा नयाँ दल चुनौतीका रुपमा खडा हुन्छ । तर चुनाव जित्नका लागि काँग्रेस र कम्युनिस्टको आफ्नै इतिहास, पृष्ठभूमि, जनमत र संगठनको शक्ति छ । त्यसलाई नयाँ दलतिर रुपान्तरण गर्नका लागि राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा साँच्चै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रविले साँच्चै नै राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो विचार, एजेण्डा, आफ्नो पार्टी, पार्टीको संस्कृति, पार्टीको नेतृत्व र ‘टीम वर्क’प्रतिको विश्वासलाई दस्तावेजमा राखेर अपिल गर्नुपर्छ । त्यो अपिल जनताले पत्याउँदा मात्र पुराना दलका लागि चुनौती बन्छ । यसका लागि लामिछानेले आन्तरिक रणनीति बनाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा पार्टी वैधानिक रुपमा दर्ता भएपछि दस्तावेजका साथ अपिल गर्ने तयारीमा उनी छन् ।
रविको राजनीतिक इनिङप्रति पुराना पार्टीको मत
सत्तासीन नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लामिछानेको राजनीतिक यात्रालाई आफूले चुनौतीका रुपमा लिएको बताएका छन् । ‘हामीले आफूलाई थप सुधार्न, अझ निखार्न, हामीले जितेको ठाउँ भन्नु हुँदैन,’ थापाले भने, ‘त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ हुँदैन । आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नु पर्छ । हामीले यो अवस्थालाई चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ ।’
तर रविको राजनीतिक यात्रालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ पुस्ताका साथीहरूको राजनीतिमा आकांक्षा हुनु, हामीहरू प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तहमा गएर काम गर्छौँ भन्ने कुरालाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ,’ थापा भन्छन् ।
राजनीतिमा लाग्ने नयाँ पुस्तालाई पुराना दलमै अवसर दिनुपर्नेमा महामन्त्री थापाको जोड थियो । ‘सबै तल्लो खुड्किलाबाट चढेर जाने होइन । विभिन्न पेसामा काम गरेर आएको मान्छेले बीच बाटोमा दलमा छिर्ने, आफ्नो अवसर, प्रतिभाहरूलाई प्रयोग गर्न पाउने बाटोहरू खोल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कुनै पेसा वा व्यवसायमा सफल हुनु राजनीतिका लागि स्वतः योग्य हुनु नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘निश्चित पेसा वा व्यवसायमा सफल वा चर्चित हुनु राजनीतिका लागि स्वतः योग्य हुनु होइन,’ उनले भने । राजनीतिमा योग्य हुन त्यसमै समर्पित हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले पनि राजनीतिमा रविको आगमन चुनौती नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तो थ्रेट महसुस भएको छैन । किनभने राजनीति भनेको विचार, दर्शन र कार्यक्रममा आधारित हुन्छ ।’
रविले राजनीतिमै ट्रायल गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘उद्यमी, व्यवसायी, कलाकार, पत्रकार राजनीतिमै भविष्य खोज्न आउने भनेपछि राजनीति अपरिहार्य रहेछ भन्ने हो नि,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा गर्नु, नयाँ विकल्प खोज्नु, विकल्प दिन खोज्नु नराम्रो होइन, राम्रो भएको छ यसले ।’
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता डम्बर खतिवडाले सेलिब्रेटीहरुले हल्लीखल्ली गर्दैमा राष्ट्र निर्माण र युग परिवर्तन नहुने बताए । लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उनले राष्ट्र निर्माण र युग परिवर्तनका लागि राजनीतिक योगदान चाहिने तर्क गरे ।
‘अलिअलि नाम चलेका सेलिब्रेटीहरुले हल्लीखल्ली गर्दैमा राष्ट्र निर्माण र युग परिवर्तन हुने भए न मण्डेला ३२ जेल बस्न पर्थ्यो, न गान्धीजी आजीवन धोतीमा हिँड्न पर्थ्यो, न लिङ्कन मारिनु पर्थ्यो, न रुजबेल्टले न्युडिल ल्याउन पर्दथ्यो, न माओले लङ मार्च गर्न पर्दथ्यो,’ खतिवडाले भने । जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका खतिवडाले भ्रमको कुनै औषधि नहुने बताए ।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामिछाने राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य भएको भन्दै राप्रपालाई कुनै नोक्सान हुने दाबी गरे । ‘रवि लामिछानेले जुन वैचारिक धार समाएर पार्टी घोषणा गर्नुभयो, त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नोक्सान गर्दैन,’ उनले रातोपाटीलाई भने । राप्रपा र रविको पार्टीको वैचारिक धार नै फरक भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाएका छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय नेतृत्वका लागि राजसंस्थालाई स्पष्टसँग अगाडि सारेका छौं । तर उहाँ संघीयताको पनि पक्षमा उभिनु भएको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नु भएको छ । उहाँको र हाम्रो वैचारिक लाइन नै फरक छ ।’
रविको पार्टीले राप्रपाका मतदाता प्रभावित गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँ राजनीतिमा आउने कुराले हामीलाई केही फरक पर्दैन । राजनीतिमा रविजीको इन्ट्रीलाई मैले चुनौतीको रुपमा लिएको छैन ।’
यस्तै विवेकशील साझाका नेता रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेले आफूहरुको असफलताबाट पाठ सिक्न रविलाई सुझाएका छन् । तर नयाँ पार्टी खोलेर रवि अगाडि आएपछि विसर्जनको दिशामा रहेको विवेकशील साझा थप संकटमा परेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको निराशाजनक परिणामपछि थलिएको विवेकशील साझालाई रविको राजनीति थप चुनौती बन्ने देखिएको छ । विवेकशील साझाका केही नेताहरु रवि लामिछानेको पार्टीमा लागिसकेको बुझिएको छ ।
विगतमा बाबुराम भट्टराईले थालेको वैकल्पिक राजनीतिको प्रयोग असफल भएपछि त्यहाँ रहेका नेताहरु रविन्द्र मिश्रतिर लागेका थिए । अहिले रविन्द्र मिश्रको वैकल्पिक राजनीतिको प्रयोग विसर्जनको दिशातिर मोडिएपछि त्यहाँ भएका नेता रवि लामिछानेतिर लागेको देखिन्छ ।
विवेकशील साझाका नेता केशव दाहालले रवि लामिछाने वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा नभइ प्रयोगका लागि मैदानमा आएको बताए । उनले रवि लामिछानेको पार्टी घोषणालाई वैकल्पिक राजनीतिको प्रयोगका रुपमा अर्थ्याए ।
‘वैकल्पिक राजनीति एउटा प्रयोग हो । नयाँ सम्भावनाको खोजी हो । त्यो प्रयोग भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राम्रो भएको छ । कुनै दिन यो प्रयोग संश्लेषण हुन्छ । त्यो दिन वैकल्पिक राजनीति स्थापित हुन्छ ।’
बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्र असफल भएको वैकल्पिक राजनीतिको प्रयोगबाट पाठ सिक्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । तर लामिछानेले पार्टीमात्र घोषणा गरेको भन्दै दस्तावेज हेर्न बाँकी रहेको दाहालले बताए ।
‘उहाँको विचार के हुन्छ, उहाँको एजेण्डा के हुन्छ ? कुन राजनीतिक ग्राउन्डमा उभिनुहुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘रविजीले दिन चाहेको नयाँ के हो ? त्यो भन्न सक्नुपर्छ । विचार, एजेण्डा, पार्टीको नेतृत्व र संस्कृति कस्तो दिनुहुन्छ ? पार्टी घोषणा मात्र भएको छ । उहाँको दस्तावेज हेर्न बाँकी नै छ ।’